Ukuqhuba okokugcina kuma-SA U19s
Raynard Van Tonder of SA U/19
Ama-Coca-Cola South Africa U19s azodlala ne-Bangladesh kumdlalo wabo wokugcina we-ICC U19 Cricket World Cup e-Queenstown kusasa. Lama-Proteas azobe eqhudelanela ukuba unombolo-5, bathemba ukuqeda umqhudelwano ngokunqoba.
Ukapteni, u-Raynard van Tonder uthe abadlali bakhe bawulungele umdlalo wabo wokugcina futhi bakujahile ukudlala ngokuzimisela okokugcina bedlalela ibheji.
Ekhuluma emuva kokuzilolonga kweqembu kokugcina, uthe; “Babukeke kahle abafana, ngifuna ukuqhuba kokugcina kubona. Kusasa ngeke kube umdlalo wokugcina kuphela, kodwa kwabanye bethu, kuzoba umdlalo wethu wokugcina njengabadlali bama-U19 ngakho sithemba ukuthi singaqeda ngokunqoba.”
Emuva kokubuka abazodlala nabo, abagcina ukudlala nabo nge-World Cup yokugcina futhi badlala kahle kwisimo futhi nokuthi bangalindelani ngosuku lomdlalo, u-Van Tonder ukholwa ukuthi iqembu linakho okudingekayo ukuthi lithole umphumela omuhle.
“Silibhekile iqembu labo kanye nenkundla esizodlalela kuyona. Akuyona inkundla enemiphumela emkhulu ngakho sizobheka ukushaya kuphosa ama-spinners ngoba banawo futhi maningi futhi kumele sigxile kumdlalo wethu njengeqembu. Kuzomele sijwayele osukwini uma sifuna ukubahlula.”
i-South Africa isanamele ukuhlula abaphethe umqhudelwano, i-New Zealand ngama-runs angu-73 kumdlalo wabo wokugcina e-Christchurch. Kubanike ukuzithemba emuva kokuhlulwa imidlalo ilandelana, owodwa umphumela wagcina ngokuphuma kumjaho wendebe. Ukapteni uthe ukunqoba bedlala ne-New Zealand kukhuphule umoya weqembu futhi bayajabula ukuphuma kanye nokudlala ngomdlandla bedlalela izwe labo.
“Singathatha umdlandla omningi kumdlalo wethu odlulile kumdlalo wethu wokugcina,” esho eqhubeka. “Bekubalulekile kithina ukuthi siwunqobe lowamdlalo futhi indlela esakwenza ngayo kusinike ukuzithemba kusasa.”
“Sithole usuku lokuphumula kusasa futhi kunike abafana ithuba lokuphumula kanye nokusuka kumdlalo futhi ukubuyela ekuqeqeshweni nomqondo ophumule futhi nokulungela umsebenzi ozayo. Abafana balungile manje emqondweni nasemzimbeni.”
Umdlalo uzovezwa ku-SuperSport 2 kusukela ngo-23:15 (SAST) namhlanje (Tuesday, 30 January), ukuhamba komdlalo kuzomenyezelwa ku-Facebook we-Cricket South Africa (www.facebook.com/cricketsouthafrica no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
Ama-SA U19s ahlela indlela ebheke phambili i-Pakistan idlulela kwi-ICC U19 World Cup semi-final i-New Zealand ihlula i-South Africa U19s nokho u-Rolfes ethole ikhulu Ama-SA U19s afuna ukuqhubeka “nezikhathi eziguqula umdlalo” Ama-SA U19s adlulela kwi-U19 World Cup Super League i-SA U19s ilungele inxenye yokulungiselela i-World Cup Abadlali bakutholile akade bekudinga kumdlalo wokugcina wamalungiselelo – u-Gwavu u-Mahatlane uyajabula ngenqubekaphambili yama-U19 ngaphambi kohambo lokuya kwi-World Cup "Ukusebenzisa amakhono” kuzo ukhiye wokunqoba i-final ye-Youth Tri-Series kusho u-Gwavu i-England U19 inqoba kabili idlala ne-SA nokho u-Breetzke ethole ikhulu i-SA U19 ibuye kahle nge-bonus-point, nokunqoba nge-Duckworth-Lewis